Ibhedi eA kwigumbi ekwabelwana ngalo kwiVegetarium kwikhaya leendwendwe
Igumbi elise- indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguFilip
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFilip iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le yindawo yabo bafuna ukungcamla indlela yokuphila esempilweni yokuntywila kwindalo esulungekileyo yeentaba zeBalkan kwaye basahlala iyure eyi-1,5 ukusuka kumbindi wesixeko saseSofia.
Kweli khaya losapho lakhiwa ekupheleni kwe19s. Uya kuziva umoya wezindlu ze-cob zesintu, zihlaziywe ngothando kwaye zongezwa nekhitshi langaphakathi kunye negumbi lokuhlambela, ukuze uthuthuzeleke.
SinguBarbara kunye noFilip abahlala kwilali yaseZhelen - eyona ndawo yaziwayo eco-friendly eBulgaria.
Sayitshintsha le ndlu yangasese yalahliweyo yezindlu ze-cob ezindala ngothando nangothando. Apha sabelana ngobomi bethu namavolontiya, abaqeqeshwayo kunye neendwendwe.
Ngokoqobo "iVegetarium" ithetha: "IMEKO EGQIBELELEYO UKUKHULA".
Iprojekthi yethu “yeVegetarium” ijolise ekuzifezekiseni ngokwaso ngophuhliso olululo lwayo yomithathu imilinganiselo yendlela eDityanisiweyo:
• LINGANISISA umlinganiswa;
• UKUTYHIBISA ezona zakhono ziphambili;
• Nyusa kwaye uzinzise inqanaba lokuziva.
Amakhaya ethu azinzileyo kunye neegadi zibonelela ngobume obuyimfuneko kuphuhliso oludibeneyo.
Sijonge phambili ekukwenzeni ube namava alo mdlalo umangalisayo!
Sikuhoya ngakumbi ukutya esikunikezayo - ukutya kwethu kusekelwe ngokupheleleyo kwimigaqo yokutya okunempilo!
Ubukhulu becala kukutya okusekwe kwizityalo, okunamafutha aphantsi atyebileyo kwiiminerali, iivithamini kunye nokutya okukrwada okuphekwa ngokulula nokuphekwa ngokulula.
Yintaphane yesaladi zeziqhamo kunye nemifuno kunye nokushukunyiswa (i-snacks) kunye nokutya okuphezulu, ukutya okuphekiweyo kunye nemifuno ye-cereal kunye nemifuno kunye nehlumela, iisosi ezimnandi kunye neziqholo zemifuno kunye nokunye.
Ngaphandle kokuyingcamla, unokubuqonda ubucukubhede bokulungiselela kwayo!
"Ukutya makube liyeza lakho kwaye iyeza libe kukutya kwakho."
La magama avela kugqirha wamandulo ongumGrike uHippocrates asetyenziswa ekukhetheni nasekulungiseleleni izitya zethu.
Abapheki bethu baye bafumana uqeqesho olukhethekileyo kwi-cuisine ye-M. D. Dimitar Pashkulev.
Indawo yethu ijikelezwe ziigadi ezintle, amahlathi, imilambo emincinci, imiqolomba kunye neminye imimangaliso yendalo. Uluntu lwethu lusembindini weentaba zeBalkan - iindawo eziphakamileyo ze-Iskar River Gorge.
Kwindawo yelali yaseZhelen kukho izinto ezahlukeneyo zendalo, zembali kunye nezentlalo, nazi ezinye zazo:
• Amatye ahlukeneyo abonisa iimbono ezintle kwi-Iskar Gorge inokufumaneka kwindawo ekufutshane kwi-radius ye-2 km, iindawo ezimbini zokuhlala ezinemithi yakudala, umlambo omncinci ococekileyo, iibhentshi zothando kunye namadlelo - iindawo ezivela njengezipho ezingalindelekanga kwi-labyrinth. anevumba elimnandi, agcwele amahlathi amakhowa kunye namasimi amahle azaliswe zizityalo ezinevumba elimnandi.
•Umqolomba we-"Mechata dupka" ubekwe kumgama weyure ezi-2. Inokungenwa ngeendlela ezintathu zokungena - elingaphantsi elikhokelela kwindawo yamanzi yomqolomba kunye nambini ephezulu, ekhokelela kwiigalari ezimbini ezihambelanayo kunye neholo eqhelekileyo. Kwiindawo kukho iiperile zemiqolomba. Kuyenzeka ukuba ungene ngaphakathi kwaye ufikelele kwi-5о yeemitha ngaphandle kwezixhobo ezikhethekileyo kunye nokubona izilwanyana eziqhelekileyo zomqolomba - ooqongqothwane, iintwala, amalulwane. Amathambo eebhere zomqolomba afunyenwe nalapho.
Kufuphi nomqolomba kukho ifama ye-eco yomhlobo wethu uBiser apho sonwabela ukuba kunye nezilwanyana ezininzi ezonwabileyo nezisimahla kunye nokungcamla okumnandi kweemveliso zobisi ezenziwe ekhaya. Ukunyuka kungenziwa mfutshane ngothutho lwe-terrain.
•Ingxangxasi “Ngaphantsi kwelitye” ibekwe malunga nomgama weeyure ezi-2 kwindlela eya kwilali yaseGara Bov. Umphakamo wokuwa kwamanzi yi-40 m. Yindawo yokuqala ye-eco-path kwindawo ekhuselweyo "i-Treskavets", ekhethekileyo kunye ne-microclimate yayo, i-flora kunye ne-fauna. I-eco-path i malunga ne-10 km ubude, kwaye ikhosi yayo yonke ithatha malunga neeyure ze-3. Endleleni, kukho iindawo ezininzi zokuphumla ezifanelekileyo kwipikiniki kunye nokuphumla. Ungaphinda ubone iingxangxasi ezintle eziziimitha ezingama-80, umqolomba othi "Kaminata", kunye neentsalela zekhaya leemonki eliphakathi "iSt. Ingelosi enkulu uMikayeli”. Ukunyuka kungenziwa mfutshane ngothutho lwe-terrain.
•Izdremets peak (1495 m) yinxalenye yendlela E3 - Kom-Emine kwaye imi kumgama weyure ezi-5. Ityhila izinto ezinomtsalane - ukusuka kwintaba yaseRila ukuya kumlambo waseDanube. Ezinyaweni zayo kukho amachibi amabini. Ukunyuka kungenziwa mfutshane ngothutho lwe-terrain.
• Ukwakhiwa kwamatye "Ijugle" ibekwe kufutshane nesikhululo sikaloliwe kwilali yaseTserovo, kumgama weyure enye. Le nto yendalo enomdla eyenziwe yintlabathi yequartz ebomvu ephantsi ye-Triassic, eneminyaka emalunga ne-250 yezigidi zeminyaka, iziimitha ezili-18 ukuphakama kwaye ifana nekhowa. Abanye abantu bathi ikwafana nentloko yomntu. “Ijugle” yayilungiselelwe indawo yendalo yomdla ngowe-1964.
•Emazantsi e-Izdrimets peak kukho iintsalela zokwenyani zendlela yamandulo yaseRoma, ekhokelela ukusuka kwimigodi yakudala ukuya kumlambo i-Iskar. Kufuphi nechibi elisezantsi kwindawo yembali iTrastena ibekwe "Trastena" lodge, enekhono lokuhlalisa abantu abangama-30, kunye neendawo zangaphandle zococeko kunye namagumbi okuhlambela, kunye nekhitshi kunye nenkantini. Iimitha ezingamashumi amathathu ukuya emazantsi kukho iintsalela zekhaya loonongendi laMaXesha Aphakathi “iSt. Panteleymon”, eyakhiwe kufutshane nesikhululo sabalindi saseRoma. Ngokweentsomi, kule ndawo kwakukho ingcwele yamandulo yeTracian, kufuphi nalapho kwiinkulungwane kamva abafundi bakaKliment Ochridski bakha indlu yeemonki. Ngexesha elithile i-abbot ye-monastery yayingumfundisi odumileyo uMartin Voevoda. Indawo engcwele yachithwa ngabantu baseTurkey ngexesha leKardjaliya. Ekuphela kwentsalela namhlanje “yiSt. Pantaley Patnik” ngomnqamlezo omdala wesiko. Ngexesha lokuhlala kwe-Ottoman kule ndawo kwakukho indawo yokulala eyayisetyenziselwa ukukhonza indlela, apho iNondyebo yaseTurkey yadlula khona. Ukunyuka kungenziwa mfutshane ngokuthuthwa komhlaba.
•Iintsalela zekhaya loonongendi baseByzantine “iSt. I-Kirik kunye neYulita "yekhulu le-12 ibekwe kwindawo engezantsi kwidolophana yaseZhelen, ebhankini lasekunene le-Iskar, kwindawo "yeKirik" - kunye nomnqamlezo wesikhumbuzo owenziwe ngamatye kunye nesinyithi. Ukuhamba ukuya apho malunga neeyure ezi-2 kunokucuthwa ngokuthutha komhlaba.
• Kule minyaka ili-10 idlulileyo, kuye kwaphuhliswa “uluntu ekuhlaleni” kummandla welali. Abantu abafuna ubomi ngokuhambelana nendalo - ishumi elinambini labantu abanomdla kunye nezibini ezitshatileyo ezininzi, abavela kumazwe ahlukeneyo, bathenge umhlaba kunye nezindlu ezihlala kwiindawo ezahlukeneyo zelali. Sidityaniswe yimigaqo yokuncedana, ulimo lokusingqongileyo kunye nokungaxhatshazwa. Kusisithethe sethu ukuhlanganisana ngobusuku bangoMgqibelo kwaye sabelane ngesidlo sethu sangokuhlwa, iintetho ezimnandi, amaphupha kunye neeprojekthi.
•Kunika umdla ukutyelela “uthungelwano” lweendawo ezili-15 zenkolo ezineminqamlezo ephakanyisiweyo ebizwa ngamagama abangcwele abahlukileyo abangamaKristu. Ngemihla ethile phakathi kukaMeyi noSeptemba, kwezi ndawo abemi bomthonyama benza imibingelelo yezilwanyana, balungiselele ukutya okuqhelekileyo, ukucula okuqhelekileyo kunye nomthendeleko weqela - "ukunikela ngezipho ukuze kuphumelele izinto eziphathekayo kunye nokomoya kubamelwane, njengesenzo sombulelo kuThixo kunye nomthendeleko. umthandazo wokucela intsikelelo kaThixo kuye wonke umntu.” (Icawa yeOthodoki)
Umbuki zindwendwe ngu- Filip
Ukuba uyanqwenela - siya kukuvuyela ukwabelana nawe ngendlela yethu yokuphila esempilweni- ulungelelwaniso phakathi kwemisebenzi yomzimba kunye nengqondo, ukuphumla, ukuhamba kwendalo, ixesha lokukhulula, iimpembelelo zokuyila, ukuphefumla okuhlukeneyo, umzimba kunye nokulawula ubuchwephesha bengqondo, ukupheka okunempilo, okwenyani. ubizo...
Sinikezela ngoqeqesho olusebenzayo lulandelayo:
• Intshayelelo kwindlela eDityanisiweyo ilandela uKen Wilber kunye nezinye iingcaphephe;
• Ukutshintshela kwindlela yokuphila elungeleleneyo yemihla ngemihla;
• Isondlo esisempilweni kunye nokupheka;
• Umzimba, ukuphefumla kunye nezenzo zokulwa noxinzelelo;
• I-Ecology kunye nezolimo ezihlaziyayo;
• Ukuntywila kwindalo yasendle (ukuhlala ngokuhambelanayo, izakhono zokuqokelela);
• Izithambiso ze-Eco kunye neemveliso zasekhaya - zenzele ngokwakho;
• Izakhono zosapho nezentlalo kunye noncedo olufanayo;
• I-paneurhythmy okanye umculo ocacileyo kunye nomdaniso.
Ukuba uyanqwenela - siya kukuvuyela ukwabelana nawe ngendlela yethu yokuphila esempilweni- ulungelelwaniso phakathi kwemisebenzi yomzimba kunye nengqondo, ukuphumla, ukuhamba kwend…